July 6, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्डलाई आशा छः देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश हुनेछ !
काठमाडौं । वास्तवमा पुष्पकमल दाहाल इमान्दार नेता हुन् । उनी क्रान्तिकालका ‘प्रचण्ड’ भएपनि शान्तिकालमा ‘पुष्पकमल’ नै देखिएका छन् । पुष्पकमल नाम जस्तो शान्त र स्थीर भने रहन सक्दैनन् । उनलाई यथास्थितिको तलाउमा ढुङ्गा हानिरहन मन लाग्छ । चलायमान बनाउन चाहन्छन् उनी जीवनलाई । आफ्ना जनसेनाको वास्तविक संख्या खुलासा गर्दाको भिडियो टेप प्रसंग, जनयुध्दमा ज्यान गुमाएका […]
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा सधैं आलस्यपूर्ण टिप्पणी, आत्मश्लाघा र कुण्ठाहरु मात्र बिस्कुन लगाईएको हुँदैन । गम्भीर बिषयलाई चिहाउने आँखीझ्याल पनि भेटिन्छन् सञ्जालमा । देशकाल र परिस्थितिलाई मसिनुगरी निखनी रहेका तिखा आँखाले चस्का दिनेगरी गरेका छोटा अनुच्छेदको खोज र अनुसन्धान भने हुन आवश्यक देखिन्छ । यहाँ दुइजना सिध्दहस्त पत्रकार र विश्लेषकका एकेक वटा टिपोट उनीहरुका फेसबूकवालबाट […]
July 6, 2021 N88LeaveaComment on नेपाल किन धर्म निरपेक्ष बनाईयो, यस्ताे एउटा लुकेको तथ्य !
काठमाडाैं । केही नेपाली नेताहरूले विदेशीक‍ो वीर्यपान गरेको रोचक प्रसंगको पहिलो खण्ड मेरो फेसबुकमा पढेर धेरैले फोन गर्नुभयो । थप जानकारी पाउँ भन्नुभयो । सन् १९७७ मे ७ मा न्युयोर्क टाइम्सको खबर, ‘जग्गा मिच्ने सुन मुन पक्राउ परे ।’ उत्तर कोरियाली मुन दक्षिण कोरियाको लागि जासुसी गरेको अभियोगमा सन् १९४६ मा पाँच बर्ष जेल परेका […]
किन गरे प्रधानमन्त्री ओलीले प्रभु साहकी पत्नीलाई फोन ?
July 6, 2021 N88LeaveaComment on किन गरे प्रधानमन्त्री ओलीले प्रभु साहकी पत्नीलाई फोन ?
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वमन्त्री प्रभु साहकी पत्नी तथा रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साहलाई फोन गरेका छन् । आफूलाई दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीको फोन आएको उनले बताइन् । फोनवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो हालखबर सोधेको उनले बताइन्। करिब १५ मिनेटको फोनवार्ताको क्रममा स्थानीय राजनीति, मौलापुर नगरको विकास, बाढी डुबान लगायतको विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो […]
July 6, 2021 N88LeaveaComment on ४९ लाखमा कार किनेपछि प्रकाश भन्छन् ‘कलाकार मात्रै भएर पनि कार चढ्न सकिन्छ’
काठमाडाैं । नेपाली सांगीतिक क्षेत्र फराकिलो बनिरहेको छ । कुनै समय गीत संगीतमा लागेर सर्जकले जीवन चलाउन नै मुश्किल पर्छ भन्ने कुराहरु खुबै सुनिन्थ्यो । तर, आज समय बदलिएको छ । गीत संगीतमा मिहिनेत गर्न सक्ने हो भने सर्जकले जीवनलाई सहज रुपमा जिउन सक्ने अवस्था बनेको छ । पछिल्लो समयमा गीत संगीतमा राम्रो क्रेज बनाएका कलाकारहरुको […]
विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल फोनमा साउनदेखि लाग्ने भयो कर
July 6, 2021 N88LeaveaComment on विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल फोनमा साउनदेखि लाग्ने भयो कर
काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेबाट अवैध रूपमा विदेशबाट आयात गरिएका मोबाइल फोन नेपालमा नचल्ने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा आएसँगै त्यस्ता फोन नियमन गर्न लागिएको हो । त्यसबाहेक प्राधिकरणले हाल नेपालमा प्रयोगमा रहेका मोबाइल फोनहरूलाई पनि अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्न सर्वसाधारणहरूलाई आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणका […]
July 6, 2021 N88LeaveaComment on ४२ महिलासँग यसरी बिहे गरेका थिए जंगबहादुर राणाले
July 6, 2021 N88LeaveaComment on राजकाजभन्दा रमझममै रमाउने राजा त्रिभुवन
नेपालको इतिहासमा ४३ वर्ष राजा भएका त्रिभुवन वीर विक्रम शाहको १ सय १६ औं जन्मजयन्ती हो, असार १७ । विक्रम संवत् १९६८ मा पिता पृथ्वी वीर विक्रम शाहको निधन भएपछि उनी ५ वर्षकै उमेरमा राजसिंहासनमा बसेका थिए । तर उनको ध्यान राजकाजमा भन्दा रमझमतिर ज्यादा रहेको विभिन्न इतिहासकारहरुले उल्लेख गरेका छन् । त्यसो त राजा […]
२१ वर्षिया यी युवतीले पिसाव फेर्न जाँदा बच्चा जन्माएर पाखोमै छा डेर बसमा आएर बसे पछि…
July 6, 2021 July 6, 2021 N88LeaveaComment on २१ वर्षिया यी युवतीले पिसाव फेर्न जाँदा बच्चा जन्माएर पाखोमै छा डेर बसमा आएर बसे पछि…
काठमाडौ । २१ बर्षिया आशा राई विवाहित हुन् । आशा हुँदा हुँदै उनका श्रीमानले दुईवटा श्रीमती विवाह गरिसकेका छन्। रोजगारको सिलसिलामा आशा ओमन पुग्नु भएको थियो । त्यहाँ रहँदा उहाँको कपिलबस्तु घर भएका केटासँग चिनजान भयो। अन्ततः उनिहरु लि भि ङ्ग टु गेदरमा बस्न थाले । केटा उतै रहे आ शा घ र फ र्कनु […]
सम्भोग गर्दा पलङ भाँचिएपछि उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता !
July 6, 2021 N88LeaveaComment on सम्भोग गर्दा पलङ भाँचिएपछि उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता !
एजेन्सी । सम्भोग गर्दा पलङ भाँचिएपछि उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकाे छ। दक्षिणपूर्वी इंगल्याण्डको बर्कशायर सहरमा एक जोडी दम्पत्तिले सम्भोगका क्रममा सावधानी नअपनाउँदा ठूलै दुर्घटनाकाे सामना गर्नु परेकाे छ । द गार्डियनमा प्रकाशित समाचार अनुसार जोन नामका पुरुष उनकी क्लेयर नामकी पार्टनरसँग सम्भोगमा लीन थिए । तर एक्कासी उनीहरु यौनक्रिडा गरिरहेको पलङ भाँच्चियो र भुइँमा […]